इनरुवा अस्पतालको पीटीए मेसिन नै गायब, कसले लग्याे व्यक्तिगत प्रयाेजनमा ? « News24 : Premium News Channel
इनरुवा अस्पतालको पीटीए मेसिन नै गायब, कसले लग्याे व्यक्तिगत प्रयाेजनमा ?
इनरुवा । इनरुवा अस्पतालमा सर्वसाधारणको उपचारका लागि खरिद गरिएको उपकरण नै गायब भएको खबर बाहिर आएको छ ।
नाक, कान, घाँटीको उपचारमा प्रयोग हुने पिटिए मेसिन करिब तीन महिनायता कहाँ छ भन्ने अत्तोपत्तो नै छैन । स्वयं अस्पताल प्रशासन र कर्मचारीमा समेत दुईमत रहेको पाइएको छ । कोहीले मेसिन अस्पतालमै रहेको दाबी गरे पनि काेहीले भने उक्त मेसिन व्यक्तिगत प्रयोजनमा अस्पतालबाहिर प्रयोगमा रहेको दाबी गरेका छन् ।
साढे तीन लाखको मूल्यमा अस्पतालले खरिद गरेको सो मेसिनबाट तत्कालिन समयमा डा. प्रविद गजुरेलले सेवा दिँदै आएका थिए ।
गजुरेलको करार अवधि सकिएसँगै उनी इनरुवा अस्पतालबाट अन्यत्र गएका छन् । डा. गजुरेल बाहिरिएसँगै कान, कान, घाँटीको सेवा प्रभावित मात्रै बनेको छैन, मेसिन समेत गायब भएको छ । जुन कुरा यतिबेला बाहिरिन पुगेको छ ।
अस्पताल प्रशासन र कर्मचारीले मेसिनको बारेमा खुलेर बोल्न चाहेनन् । उनीहरुले अस्पताल हाताभित्रै थन्किएको अवस्थामा मेसिन रहेको बताए पनि इनरुवा अस्पतालकी मे.सु. डाक्टर बिना शाक्यले भने सो मेसिन डा. प्रविदसँगै बाहिर गएको बताएकी छिन् ।
मेसिन फिर्ता गर्न पटकपटक आग्रह गरिएको बताएकी शाक्यले आफूलाई ७ दिनको म्याद दिन डा. प्रविदले भनेको बताइन् । डा. प्रविदले समय मागेको शुक्रबार तीन दिन बितेको छ । सात दिनपछि समेत सामान फिर्ता नआए आफू एक्सनमा उत्रिने शाक्यको भनाइ छ । यद्यपि करार समय सकिएर अन्यत्र गएका डा. प्रविदउपर कस्तो कार्वाही हुने हो सो बारे भने इनरुवा अस्पतालले खुलाएको छैन ।
यता अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गोपाल राजभण्डारी मेसिन गायब भएको विषय जानकारीमा आएकाले वास्तविकता जानकारी गराउन अस्पताल प्रशासनलाई भनिएको बताउनुभयो । अस्पतालको सम्पत्ति बाहिरी व्यक्तिले आफूखुशी प्रयोजनमा ल्याउन नपाइने भएकाले त्यस्तो भएको पाइए सम्वन्धित व्यक्तिउपर कार्वाहीको प्रकृया चालिने भण्डारीको भनाई छ ।
घनश्याम भुसाललाई कोरोना
काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुसाललाई कोरोना संक्रमण भएको छ । भुसालको निजी सचिवालयका
प्रदेश १ मा थप १६५ जनामा कोरोना संक्रमण, ३ जनाको मृत्यु
तारा आचार्य, विराटनगर । प्रदेश १ मा पछिल्लो २४ घण्टामा १६५ जनामा कोरोना संक्रमण भएको
‘हेल्दी च्वाइस क्लिनिक’ले ल्यायो पानीको फोहोराबाट बोसो हटाउने प्रविधि ‘लिपोसक्सन’
काठमाडौं । काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ‘हेल्दी च्वाइस क्लिनिक’ले नेपालमै पहिलो पटक पानीको फोहोरा प्रयोग गरी पेट,
मुलुकभर थप ६ सय ७२ जनामा कोरोना पुष्टि, ८ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । मुलुकभर पछिल्लो २४ घण्टामा ६ सय ७२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ
आजको राशिफल : कातिक ११ गते, बिहीबार
टुकी बालेर राज्य पर्खंदै कञ्चनपुरको खल्लामुसेटी